Indawo Yokuhlala Leli khaya lenzelwe umbhangqwana.Buyela emvelweni. Abantu bazimisele ukuphuma ngaphezulu, ukuba ngaphandle noma, ukuvumela imvelo ibe yingxenye yempilo eyodwa, ukuvumela imvelo yokucebisa ulwazimagama lwasekhaya. Vele uvumele imvelo ingene futhi iqhubeke ekuzondleni kwayo. Izinto ezicebile nezizinhlobonhlobo, ezibonisa ukuthi ukwakheka kungaba khona kanjani ngaphandle kobunzima obukhulu, njengezici eziningi zezimbali, eziyozinikela ekugcineni, ekukhetheni kokugcina ngemuva kokucatshangelwa okuningi.
Isikhala Sehhovisi Ngaphandle kwemininingwane engqubuzanayo, iHhovisi le-Samlee laklanywa nge-aesthetics elula yasendlini. Lo mqondo uhambisana nedolobha elithuthukayo. Kulesi sigaba esinemininingwane esebenza kakhulu, iphrojekthi iveza ubudlelwane obuthintekayo phakathi kwedolobha, umsebenzi kanye nabantu - uhlobo lokuhlobana okusondelene komsebenzi ne-inertia; ukumbondela okusobala; imvume ayinalutho.
Indawo Yokuhlala Yomfundi
Indawo Yokuhlala Yomfundi I-Koza Ipek Loft yaklanywa yi-craft312 studio njengendawo yabafundi yokufundela nesikhungo sentsha enomthamo wemibhede engama-240 endaweni engama-8000 m2. Ukuhlanganiswa kwe-Koza Ipek Loft kwaqedwa ngoMeyi 2013. Ngokujwayelekile, ukungena kwezindlu zabavakashi, ukufinyelela esikhungweni sentsha, indawo yokudlela, igumbi lezingqungquthela kanye ne-foyer, amahholo wokufunda, amakamelo kanye namahhovisi okuphatha ezakhiweni ezingama-12 ezinesakhiwo esakhiwe ngezinto ezintsha, sanamuhla futhi kwakhiwe izindawo zokuphumula ezintofontofo. Amakamelo abantu abangu-2 kumaseli angumgogodla ahlelwe ngokuya ngesakhiwo ngasinye, izingxenye ezimbili nokusetshenziswa komuntu okungu-24.
Isakhiwo Sehhovisi Lesi sakhiwo siyindlela entsha yokuphamba emgqeni wesibhakabhaka, oxhumanisa indawo yezimboni kanye nedolobha elidala futhi sithatha izindlela zalo ezingunxantathu ophahleni lwendlu e-Oberriet. Le phrojekthi ihlanganisa ubuchwepheshe obusha, ifaka imininingwane emisha nezinto zokwakha futhi ihlangabezana namazinga okwakha aseSwitzerland 'Minergie' aqinile. I-facade igqunywe emseleni omnyama owenziwe nge-Rheinzink mesh okhipha usizi lwamathoni ezakhiwo zamapulangwe endawo ezungezile. Izikhala zomsebenzi ezenziwe ngokwezifiso ziwuhlelo oluvulekile kanye nobubanzi bezinto zokwakha buveza imibono ku-Rheintal.
Indawo Yokubukisa Imigqa ethambile yezicathulo ayikwazi ukunganakwa ngenkathi ihumusha indawo. Ukumelela elinye iqembu izicathulo eziphezulu ezibonisa kule ndawo, uphahla lwesibili lophahla kanye nezinto eziyisishiyagalombili ezikhethekile zokukhanyisa, ngenkathi kudala imizwa, ngasikhathi sinye kuzenze zizizwe nge-amorph line kule ndawo.
Indawo Yokudlela Indawo Yokuhlala Isikhala Sehhovisi Indawo Yokuhlala Yomfundi Isakhiwo Sehhovisi Indawo Yokubukisa